Sublimation Ngwaahịa | China Sublimation Products Manufacturers, Suppliers
1000ML kalama Okpomọkụ Nyefee Sublimation inks maka Epson / Mimaki / Roland / Mutoh Printer Printing
Sublimation ink bụ mmiri-soluble nke emere site na akụrụngwa na ihe okike dịka osisi, ma ọ bụ ụfọdụ ihe sịntetik. Agba, agwakọtara na mmiri, na-enye ink agba.
Anyị sublimation ink na ọtụtụ-eji maka Epson na ndị ọzọ na ika ngwa nbipute, dị ka Mimaki, Mutoh, Roland wdg Sublimation ink e mere iji napụta enwekwukwa arụmọrụ na dị iche iche ebipụta-isi. Sublimation inks na-mere si akwa ọcha Low ume achụsakwa dyes. N'ihi ya, ha na-enye ọmarịcha mbipụta akwụkwọ na arụmọrụ ogologo ndụ. Ọzọkwa, ụdị nke kacha mma sublimation ink dị maka iji ya na ụdị akwụkwọ sublimation dị iche iche.
A3 A4 gbara ọchịchịrị / Light Okpomọkụ Nyefee Akwụkwọ maka Cotton Fabric Sublimation Printing
Ọchịchịrị na ìhè t uwe elu okpomọkụ nyefe akwụkwọ maka 100% owu nwere ike iji nkịtị agba inkjet na-ebi akwụkwọ, na ọ bụ na ọdabara nkịtị mmiri dabeere ink mmiri dabeere na ink (ink ink na-atụ aro). Mgbe usoro nke ibi akwụkwọ na mbufe ọkụ, enwere ike ịfefe ihe oyiyi na akwa akwa, yabụ ị nwere ike ịmepụta ngwaahịa dị iche iche dị ka T-shirts onwe onye, ​​ndị na-alụbeghị di, uwe elu mgbasa ozi, egwuregwu egwuregwu. okpu akpa, ohiri isi, fom, pad òké, handkerchiefs, gauze masks, ihe ndozi ụlọ. Transferredkpụrụ a na-ebufe na ngwaahịa ndị ahụ dị oke mma, ma bụrụ nke nwere agba, ume ume, nro ma na-ebu ngwa ngwa agba ngwa ngwa ịsacha.